Calumba (ကာလန်းဘာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Calumba (ကာလန်းဘာ)
Calumba (ကာလန်းဘာ) ကဘာလဲ။
Calumba ကို Madagascar နှင့် Mozambique တွင်သာတွေ့ရပါသည်။ Calumba ကို အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ အူဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ဝမ်းလျှောခြင်းများတွင် သုံးကြ၏။
ဒီဆေးဖက်ဝင်အပင်ထွက်ပစ္စည်းအတွက် လုံလောက်သည့်လေ့လာမှုမျိုးမရှိသေးပါ။ ဒီထက်ပိုသိလိုသည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ဗေဒဆရာများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ တစ်ချို့သောလေ့လာမှုများအရ Calumba သည် အူလမ်းကြောင်းမှကြွက်သားများကိုပြေလျော့စေနိုင်သည်ကို တွေ့ရ၏။ ထို့အပြင် အစာအိမ်မှအစာခြေအက်စစ်ထွက်ခြင်းကိုလဲ တိုးပွားစေသည်။ Columbin ဟုခေါ်သော ဓါတုဓါတ်ပေါင်းသည် အိပ်ပျော်စေသည့်သတ္တိရှိနိုင်ပါသည်။
Calumba အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Calumba ကို သေချာစွာပိတ်ထားသည့်ဗူးထဲတွင်သိုလှောင်ပါ။
Calumba က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ နောက်ထပ်သုသေတနများ ထွက်မလာမချင်း မသုံးသင့်သေးပါ
Calumba ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Calumba ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
• ဆေးပမာဏများလျှင်: အိပ်ပျော်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်
Calumba ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Calumba ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
Antacids များ၊ အစာအိမ်အက်စစ်ဓါတ်လျှော့နည်းစေသည့်ဆေးများသည် အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့စေသည်။ Columba သည် အစာအိမ်အက်စစ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် Columba သည် အဆိုပါဆေးများ၏ အာနိသင်အား လျော့ပါးစေနိုင်ပါသည်။
Calumba အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Columba ကို အရည်အဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပြီး တစ်နေ့လျှင် ၁-၃ အောင်စခန့် သောက်နိုင်ပါသည်။ Tincture အနေဖြင့်ဆိုလျှင် ၁-၂ cc ခန့် ထမင်းမစားမှီသောက်သုံးနိုင်သည်။ (1:5 ဖျော်စပ်ရန်)
(Calumba )က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Calumba ကို ဆေးတောင့် Tincture နှစ်မျိုးအနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of
Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO:
Mosby, 2001. Print version. Page 133.
ientname=calumba. Assessed August 6, 2016.